September 15, 2021 - Achawlaymyar
September 15, 2021 by Achawlaymyar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်ရှိနေရေး မဖြစ်နိုင်ဟု တယ်လီနော ကြေညာ မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းများ မရောင်းချဘဲ ဆက်ရှိနေရေး တောင်းဆိုမှုများ ရှိနေသော်လည်း လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိတော့ကြောင်း နော်ဝေဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းစု တယ်လီနော လုပ်ငန်းစုက ယနေ့ကြေညာလိုက်သည်။ မြန်မာ လူ့အခွင့်အရေး၊ မီဒီယာနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်း ၄၅ ခုတို့က တယ်လီနောအုပ်စု အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်း များကို စစ်ကောင်စီနှင့် ပတ်သက်နေသည့် လက်ဘနွန် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ M1 အုပ်စုသို့ အငြင်းပွားဖွယ် ရောင်း ချခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းရန် ဩဂုတ်လအတွင်း တောင်းဆိုလိုက်ပြီးနောက် တယ်လီနောဘက်က ထုတ်ပြန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောသည် OECD (စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့) ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာပြီး … Read more
သမီးနဲ့အူဝဲရေမေမေငို‌ရပြီဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့မိခင် WhatHappenedToTheWolfရုပ်ရှင်ကားကိုဂျာမဏီနိုင်ငံမှOldenburgInternationalFilmFestival တွင်OfficialCompetitationအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရပြီးWorldPremiereအဖြစ်ပြသသွားပါမည်။ OldenburgInternationalFilmFestival ကိုOldenburgမြို့တွင်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့မှ ၁၉ရက်နေ့ ထိကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊ဤသတင်းကောင်းနှင့်အတူWhatHappenedToTheWolf၏Official Teaserကိုတင်ပြလိုက်ပါသည်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့မိခင်ကြီးကလဲသမီးနဲ့အူဝဲရေမေငို‌ရပြီဆိုပြီးအခု လိုဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့မိခင်ကြီးကသမီးလေးနဲ့အူဝဲရေရင်ထဲမှာဆို့လို့လာပါတယ်၊မေမေငိုနေရပြီဆိုပြီးတော့သူ မရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ klcelenews သမီးနဲ့အူဝဲရေမေမေငို‌ရပြီဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့မိခင်WhatHappenedToTheWolfရုပ်ရှင်ကားကိုဂျာမဏီနိုင်ငံ မှOldenburgInternationalFilmFestivalတွင်OfficialCompetitationအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရပြီးWorldPremiereအဖြစ်ပြသသွားပါမည်။ OldenburgInternationalFilmFestival ကိုOldenburgမြို့တွင်စက်တင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့မှ ၁၉ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊ဤသတင်းကောင်းနှင့် အတူWhatHappenedToTheWolf၏Official Teaserကိုတင်ပြလိုက်ပါသည်။သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့မိခင်ကြီးကလဲသမီးနဲ့အူဝဲရေမေငို‌ရပြီဆိုပြီးအခုလို ဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့မိခင်ကြီးကသမီးလေးနဲ့အူဝဲရေရင်ထဲမှာဆို့လို့လာပါတယ်၊မေမေငိုနေရပြီဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ klcelenews klcelenews သမီးနဲ႔အူဝဲေရေမေမငို‌ရၿပီဆိုၿပီးရင္ဖြင့္လာတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕မိခင္ WhatHappenedToTheWolf႐ုပ္ရွင္ကားကိုဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွOldenburgInternationalFilmFestival တြင္OfficialCompetitationအတြက္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံထားရၿပီးWorldPremiereအျဖစ္ျပသသြားပါမည္။ OldenburgInternationalFilmFestival ကိုOldenburgၿမိဳ႕တြင္စက္တင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔ ထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊ဤသတင္းေကာင္းႏွင့္အတူWhatHappenedToTheWolf၏Official Teaserကိုတင္ျပလိုက္ပါသည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕မိခင္ႀကီးကလဲသမီးနဲ႔အူဝဲေရေမငို‌ရၿပီဆိုၿပီးအခု လိုဝမ္းနည္းစြာရင္ဖြင့္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕မိခင္ႀကီးကသမီးေလးနဲ႔အူဝဲေရရင္ထဲမွာဆို႔လို႔လာပါတယ္၊ေမေမငိုေနရၿပီဆိုၿပီးေတာ့သူ မရဲ႕လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာဝမ္းနည္းစြာရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ klcelenews သမီးနဲ႔အူဝဲေရေမေမငို‌ရၿပီဆိုၿပီးရင္ဖြင့္လာတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕မိခင္WhatHappenedToTheWolf႐ုပ္ရွင္ကားကိုဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ မွOldenburgInternationalFilmFestivalတြင္OfficialCompetitationအတြက္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံထားရၿပီးWorldPremiereအျဖစ္ျပသသြားပါမည္။ OldenburgInternationalFilmFestival ကိုOldenburgၿမိဳ႕တြင္စက္တင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔ထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊ဤသတင္းေကာင္းႏွင့္ အတူWhatHappenedToTheWolf၏Official Teaserကိုတင္ျပလိုက္ပါသည္။သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕မိခင္ႀကီးကလဲသမီးနဲ႔အူဝဲေရေမငို‌ရၿပီဆိုၿပီးအခုလို ဝမ္းနည္းစြာရင္ဖြင့္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕မိခင္ႀကီးကသမီးေလးနဲ႔အူဝဲေရရင္ထဲမွာဆို႔လို႔လာပါတယ္၊ေမေမငိုေနရၿပီဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာဝမ္းနည္းစြာရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ klcelenews klcelenews
စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်၌ ရန်ကုန် မြို့နယ်အချို့တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်တော့မည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဓာတ်အားလိုင်းထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ထိစပ်နေသောသစ်ပင်သစ်ကိုင်းများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရန်အတွက် စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက် နံနက် (၉)နာရီမှ မွန်းတည့်(၁၂)နာရီ ထိ မြို့နယ်အချို့တွင် ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကြောင့်သာကေတ၊ဒေါပုံ၊တောင်ဒဂုံ၊မြောက်ဥက္ကလာပ၊လမ်းမတော်၊ကမာရွတ်၊လှိုင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊စမ်းချောင်း၊မင်္ဂလာဒုံ၊ရွှေပြည်သာ လှိုင်သာယာ(အနောက်)၊ဒါးပိန်၊မြောင်းတကာ၊သန်လျင်မြို့နယ်များအတွင်းရှိနေရာအချို့တို့တွင် ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းက ထုတ်ပြန်ထားသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဓာတ်အားလိုင်းထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ထိစပ်နေသောသစ်ပင်သစ်ကိုင်းများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရန်အတွက် စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက် နံနက် (၉)နာရီမှ မွန်းတည့်(၁၂)နာရီ ထိ မြို့နယ်အချို့တွင် ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကြောင့်သာကေတ၊ဒေါပုံ၊တောင်ဒဂုံ၊မြောက်ဥက္ကလာပ၊လမ်းမတော်၊ကမာရွတ်၊လှိုင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊စမ်းချောင်း၊မင်္ဂလာဒုံ၊ရွှေပြည်သာ လှိုင်သာယာ(အနောက်)၊ဒါးပိန်၊မြောင်းတကာ၊သန်လျင်မြို့နယ်များအတွင်းရှိနေရာအချို့တို့တွင် ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းက ထုတ်ပြန်ထားသည် Credit Zawgyi စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္၌ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ေတာ့မည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားလိုင္းထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ထိစပ္ေနေသာသစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရန္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ နံနက္ (၉)နာရီမွ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီ ထိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ယာယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေၾကာင့္သာေကတ၊ေဒါပုံ၊ေတာင္ဒဂုံ၊ေျမာက္ဥကၠလာပ၊လမ္းမေတာ္၊ကမာ႐ြတ္၊လႈိင္၊ … Read more
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းတွင် တိုင်ဖွန်းမွှေသဖြင့် လူ ၃ သိန်းကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာရ တိုင်ဖွန်း ချန်သူး(Chanthu) ရှန်ဟိုင်းသို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သဖြင့် ဒေသခံပြည်သူ သုံးသိန်းသုံးသောင်းခန့်(၃၃၀၀၀၀)တို့သည် မိမိတို့ နေအိမ်များကို စွန့်ခွာ၍ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရသည်။ ယင်းမုန်တိုင်းသည် ယခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၁၄ လုံးမြောက် ဝင်ရောက်သော မုန်တိုင်းဖြစ်သည်။ ချန်သူးမုန်တိုင်းသည် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ ရှန်ဟိုင်းမြို့ အရှေ့ဖက် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ နှင့် ၂၀၀ အကြား အနီးတဝိုက်တွင် ရှိနေဦးမည်ဖြစ်ပြီး၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်မူ အင်အားပျော့က အရှေ့ဖက်အရပ်သို့ ရွေ့လျားထွက်ခွာသွားမည်ဟု မိုးလေဝသဌာနများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ရှန်ဟိုင်းတွင် စက်တင်ဘာ ၁၃ရက် ညပိုင်းမှ စတင်၍ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိကာလအတွင်း မိုးရေချိန် … Read more
အရမ်းကိုလှတဲ့ ကောင်မလေးတွေ Single ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဒီကောင်မလေး နဲ့ Fb acc မှာ Fri ဖြစ်နေတာ အတော်တော့ ကြာခဲ့ပါပြီ ။ ခန်မှန်းခြေ2နှစ် လောက်တောင် ရှိမလားပဲ ။ သူမကို ကြည့်ရတာ.. အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေပုံရတယ် ။ တစ်ယောက်နဲ့မှ Anniversary အထိ မရောက်လိုက်ဘူး ။ အချိန်တန်ရင် ပျက်သွားတာ ချည်းပဲရယ် ။ လှတာကတော့ တော်တော့်ကို လှပပါတယ် ။ မျက်လုံးလေးတွေဆို ဝိုင်းစက်ပြီး Brown Colour လေးနဲ့.. အသားအရေက နေပူထဲထွက်လေ ပိုလှလေ ၊ ဥမ္မာဓါနီ ပပဝတီ ဝင်စားသလား ထင်မှတ်ရတယ် ၊ ဝင်းနေတာပဲရယ် ။ အရပ်က မနိမ့်မမြင့် မြန်မာ … Read more
လတ်တလောအခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုတွေကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ပြည်သူတွေမှာ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် တော်တော်များများက ခက်ခဲနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း မိသားစုတစ်စုဟာ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေအပြင် နေထိုင်ရေးအတွက်ပါ ပူပန်နေရပြီး တော်တော်လေး ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတာ စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်း မြဝတီမြို့ မြေနီကုန်းလမ်ဆုံ တက္ကစီဂိတ်တစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ကလေး(၄)ယောက်နဲ့ အတူ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့ကိုပြန်ဖို့ လမ်းစရိတ်တောင် မရှိတဲ့အတွက် နေပူပူထဲ ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလကတည်းက ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတဲ့အပြင် အိမ်ဌားခလည်း မပေးနိုင်တာကြောင့် အိမ်ရှင်ကပါနှင်ချလိုက်လို့ သောကအပူတွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေရှာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြဝတီမြို့ကနေ မုဒုံမြို့ကို ပြန်စရာလမ်းစရိတ်မရှိလို့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ အဆိုပါအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို စေတနာပြည်သူတစ်ဦးက လမ်းစရိတ်အပြင် အဝတ်အစားနဲ့ စားစရိတ်ပါကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ … Read more
အားလုံး ကို သတိပေးချင်တာပါ အရင်က. မဖြစ်ပေမဲ့ အခုက. အဖွဲ့လိုက်တွေ လုပ်နေတာပါ ၁. ဆိုင်ကယ်စီး ရင်း ဖုန်းမပြောပါနဲ့ ဖုန်းကို နောက်က နေဆွဲလုပြီး ပြေးပါတယ် ၂. ခါးကြားမှာ ပိုက်ဆံအိတ် ဖုန်း မထိုးပါနဲ့ နောက်ကနေ ဆွဲလုပြီး ပြေးပါတယ် ၃. လူပြတ်တဲ့ နေရာ ဆိုင်ကယ်မရပ်ပါနဲ့ ဖုန်းရပ်မပြောပါနဲ့ ဓ ါး နဲ့ထိုးပြီး ဆိုင်ကယ်လုပါတယ် ၄. ဈေး ဆိုင်တွေမှာ ဈေးဝယ်ရင် ဆိုင်ကယ်ကို အသံမည် ကိရိယာ တပ်ဆင်ပြီး ထားပါ ဥပမာ coco. လို ဆိုင်မျိုး ဈေးဝယ်ရင် အပြင်မှာ ထားခဲ့ရတာ ပါ ၅. ဖုန်းပိုက်ဆံ အိပ် ကို ကျောပိုးအိပ် … Read more
အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်စတင်ကတည်းက ပြည်သူ့ဖက်ကရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဆရာဇင်ယော်နီဟာ ယနေ့သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်း ဗေဒင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ အာဏာရှင်အားပေးဖြစ်ကြောင်း ဝိုင်းဝန်းစွပ်စွဲခဲ့ကြသလို ” ပြည်သူ့ဖက်ကရပ်တည်တာမှန်ကန်တယ်ဆိုရင် အခုချိန်ထိ ဘာကြောင့် အဖမ်းမခံရသေးတာလဲ ” ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေဟာ တစ်ဖက်လူအတွက်တော့ အတော်လေးထိခိုက်ရလွန်းပါတယ်။ အန္တရာယ်ကိုကြိုမြင်တာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်းနေ ခဲ့ပေမယ့် သတင်းပေးသူကြောင့် လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါပြီ။ အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက (၂၀၂၁) ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကို အတိအကျ ဟောပြောခဲ့တဲ့ ဆရာလင်းညို့တာရာဖမ်းဆီးခံရခြင်း (၇) လနဲ့ (၁) ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တတ်သိနားလည်တဲ့ လောကီပညာရှင်နှစ်ဦး အခုလိုအချုပ်အနှောင်ခံရတာ တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိ ကြောင်း ပြည်သူတွေက ဝိုင်းဝန်းပြီးမှတ်ချက်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်သူ့ကောင်းကျိုးအတွက် အမြဲလိုလို ယတြာလေးတွေရေးသားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့ အချုပ်အနှောင်တွေကနေလည်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ခင်မင်ရသူတွေကဖုန်းတွေဝိုင်းဆက်ကြပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့လုံးဝဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘဲ တကယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်း ခင်မင်ရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ … Read more
ကလေး နို့ကို ညစ်ခိုင်းသူများ၊ ကတုံးတုံးခိုင်းသူများ၊ ချက်ထဲ ဟိုဆေးထည့် ဒီဆေးထည့်ခိုင်းသူများ ၊ သနပ်ခါး၊ ပေါင်ဒါ သုံးခိုင်းသူများ ဖတ်ထားကြ ကိုယ်တွေနိုင်ငံက ကျန်းမာရေး ပညာပေး ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အရိုးစွဲနေတဲ့ မဟုတ်မဟုတ် အတွေးအခေါ် အယူအဆကတော့ ပြင်ကိုမပြင်နိုင်ကြဘူး တလွဲဆံပင်ကောင်းတွေ သနပ်ခါးက သဘာဝလို့ တော့ လာမပြောနဲ့ ဘယ် သနပ်ခါးတုံးမှ ပိုးသတ်ပြီးရောင်တာ မရှိသေးဘူး ကလေးမိဘတွေ သတိထားကျပါ မရှိတာထက် မသိတာကခက် မသိတာထက် သိသိနဲ့မလိုက်နာတာက ပိုခက် ကလေးအနှီးဖွင့်လိုက်တော့ ချက်ပုပ်တဲ့အနံ့ကထောင်းခဲရလိုက်တယ် ။ ခေါင်းလေးပြောင် ၊ အဖျားတွေတတ် နို့အုံလေးယောင်ပြီး ငိုနေတဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး သနားစိတ်နဲ့အတူ မိဘတွေကို နဲနဲတော့ဆူမိတယ် ။ ဘယ်မှာမွေးတာလဲ ဆိုတော့ ဆေးရုံမှာ ဆရာမတွေကလဲဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေပြောပြတယ် အိမ်က … Read more
ဆေးသမားမရှိ စစ်တပ်မရှိ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ၁%သာရှိတဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံ အကြောင်း…
ဆေးသမားမရှိ စစ်တပ်မရှိ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ၁%သာရှိတဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံ အကြောင်း ဘူတန်နိုင်ငံတွင် အမျိုးသား ၃၀% လောက်ဟာ ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ပြီး ၁၀ နှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အမှုတစ်မှုပဲရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီ အမှုကလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဖိနပ်စီးပြီး ဝင်မိခြင်းပင်ဖြစ်သည် ဘူတန်ဟာ World Map of Happiness ကမ္ဘာ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံများမြေပုံမှာ ပဉ္စမနေရာကိုယူခဲ့တယ် ဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ် အကျယ်အဝန်းဟာ ၄သောင်း ၇ထောင် ကီလိုမီတာ ပတ်လည်ပဲရှိတယ် လူဦးရေပေါင်း ၆သိန်း ၇သောင်းကျော် ရှိပြီး ဘူတန်လူမျိုး (၅ဝ%)နီပေါလ်လူမျိုး (၃၅%)နဲ့ ကျန်လူမျိုး (၁၅%) ဖြစ်ကြတယ် (၇၅%) က ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး (၂၅%)က ဟိန္ဒူဘာသာတွေဖြစ်တယ် ၁၉ဝ၇ ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးမြို့တော်က Thimphuဖြစ်တယ် ဘူတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးမြို့ငယ်လမ်းအသွယ်သွယ်မှာ … Read more